Shina Aluminum Foil MgO Roofing Sheets orinasa sy mpamatsy | Shenghang
Ny karazana fahatelo vokatra vita amin'ny tafo magnesium oxide: Aluminum Foil MgO Roofing Sheets.
Ny vita dia aluminium foil. Ny asany dia ny fanoherana ny haizina, ny fanakanana UV ary ny fanoherana Acid & alkali no tsara indrindra. Ny trano-tafo vita amin'ny aluminium foil MgO dia azo ampiasaina koa mihoatra ny 30 taona.
Ny toetra mampiavaka ny fampivoarana dia mahatonga ny boaty MGO tafo fanamboarana ho ampiasaina amin'ny atody am-bavony amin'ny mari-pana, ny indostrian'ny haintany avo, toa ny zavamaniry simika, famahanana ny toeram-pambolena, orinasa fanariana, toeram-pivarotana, trano fitehirizana, fivarotana tsena, garazy, tafo fanitso. etc.
Ny vokatra koa dia manolotra fiarovana tsara amin'ny afo sy ny insulation mafana.
FAHAFATESANA FIRE:Ny jiro MgO Roofing dia vita amina fitaovana isan-karazany, aorian'ny fisavana avy amin'ny fikambanana nahazo alalana nasionaly, dia nahatratra ny kilasy A1 ny mpamono afo. Ny mari-pana refiny amin'ny 1200 degre. Ity mari-pana refignorantie ity dia mihoatra lavitra noho ireo fitaovana vita amin'ny tafo hafa, toy ny simenitra simenitra, sheet vy, lambam-paty PVC, sns. Koa dia karazana fitaovana fanamafisana azo antoka sy tsara fanamboarana afo.
FIVORIANA FINOANA: MgO dia karazan-tsindrona famonoana voajanahary, aorian'ny fisavana avy amin'ny fikambanana nahazo alalana nasionaly, ny anton-toetran'ny fitrandrahana ny tafo fanalefahana dia 0.169w / mk ， io teboka io dia ambany noho ny fitaovana hafa noho ny tafo, noho izany dia safidy tsara ny takelaka tafo MgO. fitehirizana angovo sy fampihenana ny vidin-tafo.
Orinasa fanodinana Galvanized
Faritra fananganana: 5000sqm
Aluminum Foil MgO Roofing tiles Ho tafo sy rindrina tontonana.
Noho ny mari-pana, avo korontana ao amin'ny orinasa fanodinana Galvanized ka ny Aluminum Foil.
Ny tafo MgO no safidy tsara indrindra satria ny fampisehoany tena tsara amin'ny fanoherana sy ny Acid & Alkali, mahatohitra, mahatohitra hafanana.
Previous: PET Membrane Mgo Roofing Sheets
Manaraka: Mou Acicst Board
Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume, Sheet vy voakorontana, Tady fandrefesana, Sheet plastika vita amin'ny plastika, Sampam-by vy vita amin'ny vy, Mpitety tafo fanala,